Kaftanada Qosol Badan ee Reer Burco W/Q: Cali Cabdi Coomay
Monday June, 18 2018 - 22:09:56
Monday February 26, 2018 - 10:27:47 in by salman abdi
Reer Burco waa dad u badan af-maal oo si fudud u helay eray-bixinta kaftan ee lagu qoslo, taariikhiyan way iska lahaayeen dacaayadaha caan baxay oo laga sheekeeyo ilaa maanta.
Dhaqan ahaan waa bulsho fudayd lagu xanto oo aanay ku badnayn hubsashadu. Waxa kale oo jiray kaftan ficil ku dhisan oo u dhaxayn jiray Hargaysa iyo Burco. Waxa aynu halkan ku soo koobi doonaa noocayada kaftana reer Burco ee wakhtiyadii hore dhacay iyo kuwan casriga cusub la jaanqaadaya:
= Mid ka mid ahaa odayaasha reer Burco ayaa la su’aalay bal inuu is-barbardhigo dawladii Maxamed Siyaad iyo kuwii ka dambeeyey, ismabuu dhibine wuxuu yidhi”Dawladdii Maxamed Siyaad
Barre waxa ay ahayd Qaaxo, balse kuwii ka dambeeyey waa Kansar aan dawo lahayn.
= Wakhtiyadii dawladii Maxamed Siyaad waxa Hargaysa badhasaab ka noqday nin la odhan jiray Af-gaab. Ninkani markuu dadka u khudbadaynayo wuxuu halhays u lahaa” Ma ila socotaa”, markaasay dadkuna ka daba odhan jireen " Haa”, muddo ka dib ayaa Burco loo beddelay Af-gaab, markaasuu u khudbadeeyey reer Burco oo fagaare badhtamaha magaalada ka hadlay, sidii caadada u ahayd ayuu yidhi” Ma ila socotaa”, markaasay reer Burco yidhaaheen " waanu kaa horraynaa”
Kaftanka Casriga ah ee Reer Burco
= Kiniinka Hurdada—————————-mid ka mid ah guddoomiyeyaasha saddexda xisbi
= Qofka imtixaanka dhaca­———————————– waa lagaga shubtay